लेलेबाट सात दिन हिँडेर सिमानामा पुगेका मजदुर भारत जान पाएनन् ! « Bagmati Online
लेलेबाट सात दिन हिँडेर सिमानामा पुगेका मजदुर भारत जान पाएनन् !
ललितपुरको लेलेबाट पैदल हिँडेर आफ्नो देश जान आएका भारतीय मजुदुरले सीमा नाका भने पार गर्न सकेनन्। ललितपुरको लेलेस्थित एचबी इँट्टाभट्टा उद्योगमा काम गर्दै आएका ३३ जना भारतीय मजदुर सिन्धुली, बर्दिवास, जनकपुरधाम हुँदै जटही सीमा नाकासम्म आइपुगे। सीमा नाकाबाट प्रवेश पाउने आशा लिएका उनीहरुलाई अन्ततः सशस्त्रले जान दिएन। ललितपुरबाट करिब ७ दिनसम्म पैदल यात्रा गर्दै आएका ३३ भारतीय मजदुर अहिले धनुषाको नगराईन नगरपालिकाको शरणमा छन्। लुकिछिपी सीमा पार गर्न खोजेका उनीहरुलाई सशस्त्रले समातेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको हो।
इँटाभट्टा बन्द भएपछि उनीहरु फुर्सदिला भए। खानेबस्ने समस्या हुने देखेपछि उनीहरु पैदल हिँडेर सीमा नाकासम्म आएका हुन्। उनीहरु अहिले राजेश्वर निधी माध्यमिक विद्यालयमा वास बसेका छन्। अहिले पनि स्थानीय प्रशासनले छाड्ने प्रतिक्षामा छन्। ती सबै भारत विहारस्थित मधुवनी जिल्ला र दरभंगा जिल्लाका हुन्। उनीहरुको भोजन तथा वासको व्यवस्था नगराइन नगरपालिकाले मिलाएको छ। विद्यालयमा भारतीय मजदुरहरुको रेखदेखका लागि दुई जना नेपाल प्रहरीका जवान र सशस्त्र प्रहरी जवानलाई खटाइएको छ। नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ३का वडाध्यक्ष देवलाल यादवले खानाको राम्रै व्यवस्था भए पनि सुत्ने वातावरण सहज नभएको बताए। उनीहरु विद्यालय बरण्डाको भुइँमै सुत्न बाध्य भएको यादवले बताए।
भारत विहार राज्य दरभंगा जिल्ला अमैठीका ३५ वर्षीय चन्द्रभुषण सदाले एक सातासम्म पैदल हिँडेर सीमामा आए पनि पार गर्न नसक्दा ज्यादै दुखी तुल्याएको बताए। उनले भने ‘जटही पुग्नै लाग्दा स्थानीयवासीले राघोपुर तर्फबाट जानुस् भने, हामी सोही बाटो भएर गयौँ तर प्रहरीले सीमा नै कट्न दिएन।’ खाने व्यवस्था राम्रै भए पनि सुत्न असहज रहेको उनले बताए। वडाध्यक्ष यादवका अनुसार उनीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ। सेताेपाटिमा नेहा झाले समाचार लेख्नुभएको छ ।